Lawula ixabiso lokukhanya kwi-iPhone yakho ukuya kweyesibini | IPhone iindaba
Namhlanje, umhla woku-1 kweyeSilimela, ilizwe lethu lingene kumaxabiso amatsha ombane. Olu tshintsho lubangele isidubedube esikhulu kuthungelwano nangaphandle kwayo, kwaye sinoluvo lokuba iinkampani zombane zenza kwaye zihlengahlengise ukuthanda kwazo kungekho mntu uzinqandayo. Oko kwathethi, eyona nto sinokuyenza kukuziqhelanisa nemeko kwaye ngoku sinezicelo ezinokubangela umdla koku, com yimeko ye-redOS app.
Kule meko, usetyenziso lwenethiwekhi lusinika uthotho lweeparameter ezinomdla kakhulu kumthengi. Isibonisa ngalo lonke ixesha amaxabiso entengo ye- inqanaba elitsha le-2.0 TD, nokuba kukwincopho, kumaflethi nakumacandelo entlambo. Khumbula ukuba:
Ixesha eliphakamileyo: ngexabiso eliphezulu, ukusuka kwi-10 ekuseni ukuya kwi-2 emva kwemini kwaye ukusuka kwi-6 emva kwemini ukuya kwi-10 ebusuku ukusuka ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu, ngaphandle kweholide.
Ithuba elicacileyo: Ixabiso elingabizi kakhulu ukusuka kwi-8 ukuya kwi-10 leyure, ukusuka kwi-2 kuye kwi-6 emva kwemini kwaye ukusuka kwi-10 kuye kwi-12 ebusuku
Ixesha lentili: ngexabiso elincitshisiweyo, kubandakanya iiyure zasebusuku (ukusuka nge-0 kusasa ukuya kwi-8 kusasa) kunye nazo zonke iiyure ngoMgqibelo nangeCawa kunye neeholide (kuphela iiholide zesizwe).
Yiyo loo nto ukwazi ixabiso ngeyure nganye yekilowathi kubalulekile ngalo lonke ixesha.kwaye isicelo se-redOS siza kusinceda kule meko, sibonisa amaxabiso njengomthengi nanjengongcali. Singongeza iodolo kumaxabiso entengiso, ibango, ukuvelisa kunye nokukhupha i-CO2. Sisicelo esipheleleyo nesimahla sokwazi ixabiso le-kWh kwangoko.
Ngokusengqiqweni, ezinye iinkqubo ezinomdla zokulawula ukusetyenziswa kunye neemitha zihlala ziinkampani zokuhambisa umbane, ke umsebenzisi unokulawula ukusetyenziswa kwabo, ityala labo kunye nolunye ulwazi olugcweleyo kwi-intanethi ngokusetyenziswa kwazo. Ezi zicelo ziphelele isimahla kwaye iyafumaneka kwivenkile yeApple. Endesa, Iberdrola, Repsol, njl ...
Oku kunokuba yenye yeendaba ezibanzi malunga nokuba umsebenzisi ngamnye unaluphi uluvo / isikhalazo sakhe kwaye ngokungathandabuzekiyo bahlala bengazithandi ngenxa yento emele ukuyiyeka Ekugqibeleni Ngale ndlela, iinkampani zombane azifuni kulahlekelwa yimali kwaye imalunga nantoni ukusasaza ngakumbi izinto ezisetyenziswayo ngokwamaqela angasetyenziswanga kangako ukuze ezi zinto zingagxili kwiiyure ezithile zosuku, kodwa utshintsho aluthandi kakhulu masithi ...
Asizukungena kwiingxabano malunga nexabiso eliphezulu okanye hayi lombane, sithetha ngesicelo esivumela ukuba sizibone iindleko zezi kWh ngalo lonke ixesha. Iindaba ze-iphone zijolise ekwaziseni ngezicelo eziluncedo ezinje ngale umsebenzisi angalibona ixabiso lombane ngalo lonke ixesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Ivenkile yosetyenziso » Lawula ixabiso lokukhanya kwi-iPhone yakho ukuya kweyesibini
I-Apple ivuselele iWWDC 2021 ngesitishi esiphilayo kwiYouTube